Sumada Jumlada Gaarka ah ee Jumlada Sublimation Sublimation Kooban oo Kooban Daabacaadda Polyester Spandex Dharka hoostiisa ee dharka gaagaaban soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha |RAJO
Kooxda & QC
Dharka hoose ee ragga
Xiro kubbadda kolayga
Xiro kubbadda cagta
Dharka dabaasha & Dharka xeebta
Dharka hoose ee dumarka
Dharka hoose ee ilmaha
Dharka hoose ee wiilasha
Naqshadeynta Sawirka Ragga Gaarka ah ee Feeryahanka Dharka hoose ee Polyester-ka
Labo Tone Midab Goosan Ragga Kastuumada Feeryahanka Neefta Gaarka ah...
Ragga Midabka cad ee maran nigis-hoosaadka Custom Brand Feeryahan B...
Daabacaadda Dijital ah ee Ragga & Feeryahanka Caddaanka Caddaan P...
Warqad Caan ah Daabacaadda Ragga Gaarka ah ee Kastuumada Summada Feeryahanka...
Daabacaadda Dijitaalka ah ee Ragga & Feedhiyaha Custom Polyest...
Summada Gaarka Loo Leeyahay Jumladda
Summada Caadiga ah ee Feedhyahanka Kooban ee Buun-buuninta Daabacaadda Polye...
Sublimation-ka-hoosaadka gaarka ah ee sanduuqa bannaan ee polyester-ka L...
Summada Gaarka ah ee suufka Daabacaadda Wiilasha Dhar gaaban oo gaaban Custom...
Summada Gaarka ah ee Feeryahanka Kooban Sublimation Sublimation Print Polyester Spandex Dharka hoose ee gaaban
Faahfaahinta Baakadaha:Sida loo baahan yahay
Tirada (Qeybaha) 1-48 49-3000 >3000
BariWaqtiga (maalmo) 20 30 In laga wadahadlo
- Naqshadaynta gaarka ah:Isku-dhafka Cudbiga iyo Is-beddelka Spandex
- Kooban Feeryahan:Raaxo iyo Neefsashada
- 3D Daabacaadda Dijital ah
- Labbiska ka dhig mid madadaalo leh
- 100% keenista shixnadda wakhtiga ku habboon
* Xajmiga: La habeeyay
* Midabka: La habeeyay waa la aqbalayaa
* Qaabka: Fashion
* MOQ: Low MOQ nala soo xiriir
* Hababka xirxiran: Waa la bedeli karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha
suunka Ma libdhiyo
Naqshad Fashion U-Boorsooyin
Kahor intaadan dhaqin, ku qooy biyo ilaa 10 daqiiqo, wakhtiga qoolku waa inuusan noqon mid aad u dheer.Ha ku dhaqin biyaha alkaline.Saabuun dhexdhexaad ah ama jajab saabuun ah iyo saabuun dhexdhexaad ah ayaa la dooran karaa.Xalka qubayska waa inuu ahaadaa heerkul yar ama heerkulka qolka.Ka dib dhaqid, si tartiib ah u tuuji biyaha oo iska ilaali maroojin.
CMS Shaxda cabbirka M L XL XXL
A 1/2 dhexda 33 35 37 39
B dhexda 3.5 3.5 3.5 3.5
C dhererka baxay 27 28 29 30
D waa 21 22 23 24
E kor u kaca hore 21 22 23 24
F Dib u kac 22 23 24 25
1.Waxaa qoray warqaad
Waxaa diray Courier -- 4-7 maalmood oo shaqo, waxaan ku heli karnaa qiimo dhimis gaar ah FedEx, DHL, TNT, UPS.
Waxa aad heli kartaa alaabta dhawaan (7-10 maalmood), laakiin waxa aad u baahan tahay in aad bixiso cashuurta gaarka ah iyo kharashka wakiilka soo dejinta marka alaabtu soo degto madaarka .
Jaakada rarida oo hooseeya iyo gaarsiinta gaabis ah (30-40 maalmood si waafaqsan).Ku habboon tiro badan iyo wanaag aan degdeg ahayn .
Qiimaha gaadiidku wuu ka sarreeyaa xamuulka badda, wuu ka hooseeyaa xamuulka hawada.Waqtiga keenista (15-20 maalmood).tareenku wuxuu ku kooban yahay wadamada leh khadadka tareenada.
HOPESAME waxay ku taal magaalada Shishi, Quanzhou, Gobolka Fujian, Shiinaha.Waa asalka "Waddada Xariirta Badda".Magaalada Shishi waxay caan ku tahay dharka.Waa magaalada ugu weyn ee dharka ee Aasiya waana mid ka mid ah saldhigyada wax soo saarka dharka iyo dharka iyo xarumaha qaybinta ee China.It waxay leedahay silsilad dhamaystiran oo dhar iyo dhar ah oo daboolaysa alaabta ceeriin, miiqinta iyo tolida, bleaching iyo dhamaystirka dheeha, farsamaynta dharka. ,wax soo saarka qalabaysan, R&D iyo design, marketing iyo beeraha kale.Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay diiradda saareysay dhoofinta dharka, inta badan waxay ku hawlan tahay soo saarista dharka dhammaatay, dhar-dharka iyo qalabka.
Q1.Adeeggee hal joogsi ah oo aad bixiso?
Adeegeena halka joogsiga ah wuxuu inta badan diirada saaraa nigisyada, dharka isboortiga, dharka ragga, iyo noocyada kala duwan ee alaabada kaydka ah ee qiimaha jaban.Waxaan ku bixin karnaa alaabooyinka ugu tayada wanaagsan gudaha miisaaniyadda macaamiisha si aan u daboolno baahiyaha OEM/ODM ee kala duwan.
Q2.Sida loo xakameeyo tayada alaabta?
Marka hore, waxaanu eegi doonaa heerarka ugu sarreeya ee alaabta ceeriin gudahood miisaaniyadda macaamiisha, labaad, waxaan leenahay qalab wax soo saarka horumarsan iyo shaqaale xirfad leh, Saddexaad, muunad random ee habka oo dhan ka hor wax soo saarka, inta lagu guda jiro wax soo saarka, iyo dhamaystirka wax soo saarka si loo hubiyo in alaabta waa iyadoo la raacayo shuruudaha xakamaynta tayada.
Q3.Immisa alaab ayaad u haysaa alaabtaada jirta?
Alaabtayada jira si madax banaan ayaa loo horumariyay oo loo qaabeeyey.Waxaan diyaarin doonaa produciton isla marka aan helno lacagta ugu horeysa.Oo waxaad dhammayn doontaa lacag bixinta kama dambaysta ah ka dib dhalmada.
Q4.Waa maxay habka caadadaada?
Macmiilku wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo muunad ama liiska sawirka, soo jeediyo agab iyo shuruudo farsamo.Wareegga wax-soo-saarka muunadku wuxuu ku saabsan yahay 7-13 maalmood (waxay kuxirantahay kakanaanta habka).Ka dib marka macmiilku xaqiijiyo muunada, waxaanu u isticmaali doonaa nidaamka tayada muunada ilaa wax soo saarka caadiga ah (wareegga wax soo saarka ayaa u baahan in laga xaajoodo).
2005 Guga Canton Carwadii
Bandhigga Ilaha Caalamiga ah ee 2013
Hore: Sublimation Custom Kastuumo Feedhyahan Madhan Polyester Lugaha Dheer Ragga Warshada Gaaban Oo Kooban
Xiga: Summada Jumlada Gaarka ah ee Jumladda daabacaadda Wiilasha Dhar gaaban oo gaaban Feeryahanka Dharka hoose ee Ragga
Dharka hoose ee feerka ragga
Dharka hoose ee ragga oo kooban
Jumlo Dharka hoose ee Ragga
Dharka hoose ee Ragga Feeryahanka ah oo Kooban
Nigisyada Ragga Custom
Nigisyada Nimanka Kastuumada
Ragga Midabka cad ee maran nigis-hoosaadka gaarka ah ee astaanta Bo...
Sublimation-ka-hoosaadka gaarka ah
Summada Gaarka ah ee Jumlada leh ee daabacaadda suufka oo kooban
Summada Cusub ee Tayada ugu Saraysa ee Lagu Daabacay Hoosta...
Labo Tone Midab Goosan Ragga Kastuumada Feeryahanka Custom B...
2022 Qiimaha Wacan ee Feeryahanka Gaaban ee Polyester Mix Span...
& Lasoco wax cusub
Cinwaanka:6/F, No.1420, Songtang Road, Baogai Town, Shishi City, Gobolka Fujian, Shiinaha .PC362700
Dharka hoose ee ragga, Niman kastuumo, Gents Surwaalka, Dharka hoose ee ragga, Ragga Feeryahanka Kooban, Ragga Kastuumada Feeryahanka Custom,